दिल्ली पुगेका नेपाली बिरामीको व्यथा- विचार - कान्तिपुर समाचार
दिल्ली पुगेका नेपाली बिरामीको व्यथा
काठमाडौं — काठमाडौंमा १० वटा अस्पताल र डाक्टरकहाँ जाँदा पनि शरीरमा के भएको हो भन्ने टुंगो नभएपछि एउटा बिरामीले थप उपचारका लागि भारत आउने मानसिकता बनाउँछ ।
नयाँ दिल्लीमा उपचार गराउन आउने धेरै बिरामीको गुनासो हुन्छ– एक वर्ष अस्पताल धाउँदा पनि रोग पत्ता नलागेपछि भारत आइयो ।
विगत दुई वर्षदेखि क्यान्सरको उपचार गराइरहेका मेरै एकजना आफन्तको गुनासो छ– हड्डीमा भित्र क्यान्सर भएको रहेछ तर एक वर्षसम्म बौद्धमा गएर तातोले सेक्न डाक्टरले सुझाव दिए र त्यसै गरियो । दिल्ली आएपछि एपोलो अस्पतालका डाक्टरले उनलाई भने, ‘तपाईंले यति धेरै सेक्नु भएपछि कि अरू केही समय निरन्तरता दिएको भए तपाईंको खुट्टा नै काटेर फाल्नुपथ्र्याे ।’ त्यसैगरी मेरा एकजना साथीकी श्रीमतीको नेपालका विभिन्न अस्पतालले तयार पारेका रिपोर्ट हेर्नेबित्तिकै एपोलो अस्पतालका एकजना महिला डाक्टरले मेरै अगाडि भनिन्, ‘के हो यस्तो रिपोर्ट, केही बुझिँदैन, अब यहाँको रिपोर्ट आएपछि मात्र केही भन्न सकिन्छ । यस्तो केही नबुझिने रिपोर्टबाट के पत्ता लाग्छ र ?’
दिल्लीको यो अवस्था थाहा पाइसकेका एकजना सिनियर साथीले चाहिं केही महिनाअघि टेलिफोनमा भने, ‘भाइ, नेपालमा धेरै चेकअफ गर्दा रिपोर्टको भारी नै भएको छ । नेपालको रिपोर्टलाई मान्यता दिने कुनै अस्पताल छ कि बुझिदिनुपर्‍यो ।’ केही अस्पतालमा बुझियो तर यसै भन्न सकिएन । पछि उनले भारत आउने योजनै रद्द गरे । नेपालमा कम्तीमा रिपोर्ट मात्र गतिलो भए पनि पैसा जोगिने बिरामीको आस हुन्छ ।
यी त केही सामान्य समस्या भए । औषधोपचारका लागि भारत आउने नेपालीले अरू धेरै समस्या भोग्न थालेका छन् । केही वर्षयता भारतमा उपचार गराउन आउने नेपालीको संख्यामा निकै बढोत्तरी आएको छ ।
भारतका मुख्य अस्पतालमा वार्षिक रूपमा कति बिरामी आउँछन् भन्नेबारे जानकारी दिन अस्पतालहरू तयार छैनन् । तर राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पताल, मेदान्त अस्पताल, एम्स, एपोलो, क्याक्स अस्पातलमा दिनहुँ ठूलो संख्यामा नेपाली बिरामीहरू भेटिन्छन् । शरीरको रोग र पारिवारिक पीडा त आफ्ना ठाउँमा छ, उनीहरूले पाउने दु:खको पनि व्याख्या गरेर साध्य छैन । माथि नै उल्लेख गरिएझैं नेपालबाट ल्याएका रिपोर्टका ठेली हेर्दै नहेरी उपचार सुरु हुन्छ । यसमा हाम्रा अस्पतालको कमजोर गुणस्तर हो कि भारतका अस्पतालहरूको खोट हो, पत्तो पाउन कठिन छ ।
त्यसैगरी कतिपय अवस्थामा डाक्टरले बिरामीलाई पर्याप्त जानकारी नदिँदा बिरामी के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहने गर्छन् । यतिबेला एकजना उच्च सरकारी अधिकारी नै त्यसको सिकार भएका छन् । उनी भन्छन्, ‘पेटमा समस्या आएपछि डाक्टरकामा गइयो । उनले तत्काल अप्रेसन गर्नुपर्छ, नत्र क्यान्सर हुन्छ’ भने । अर्काे डाक्टरकहाँ गएर त्यही रिपोर्ट देखाएर कुरा गर्दा उनले यसो भने, ‘तपार्इं त अप्रेसनको सौखिन हो कि के हो ? अप्रेसन गर्नु पर्दैन, ठीक हुन्छ ।’ त्यसपछि म परें फन्दामा, अब म के गरौं, कहाँ जाऊँ ?
त्यसैगरी अर्को समस्या हो– पैसाको । विशेष गरी नोटबन्दीपछि भारतमा नगदको समस्या देखिन्छ । कतिपय अस्पतालले त नेपालीलाई पनि डलर पैसा तिर्न भनिरहेका हुन्छन् । डलर त भएन भएन, भारतीय रुपियाँमा तिर्ने कार्य पनि निकै झन्झटिलो छ । पहिलो त नेपालबाट पर्याप्त रकम ल्याउनै समस्या छ ।
नगद नै भए पनि अस्पतालहरूले बिरामीलाई उक्त नगदको स्रोत खुलाउन दबाब दिने गर्छन् । अर्को समस्या सन् १९५० को सन्धिअनुसार एकअर्काको नागरिकलाई समान हैसियत दिने भनिए पनि निजी अस्पतालहरूले नेपाली बिरामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय वर्गमा राखेर उपचार गर्ने गर्छन् । यसले गर्दा नेपाली बिरामीहरू १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क बुझाउन बाध्य छन् । केही सरकारी अस्पतालबाहेक निजी अस्पतालमा नेपाली बिरामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक सरह शुल्क लिइन्छ र त्यहीअनुसारको शुल्क उठाउने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी अस्पतालहरूले आफूहरूलाई सस्तो दरमा बाहिर औषधि किन्नसमेत नदिएको उनीहरूको गुनासो रहने गरेको छ ।
यस विषयमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको पनि खासै ध्यान गएको पाइँदैन । दूतावास अन्य महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक विषयहरूमा व्यस्त रहने हुँदा नेपाली नागरिकले भोगेका समस्या त्यति प्राथमिकतामा छैनन् । केही पहुँच भएकाले दूतावासको सिफारिसमा केही छुट गराउन पहल गर्ने गर्छन् तर दूतावाससम्म आउन नसक्ने भने जति भन्यो, त्यति पैसा तिर्न बाध्य छन् । अस्पतालमा नेपाली नागरिकले यति मात्र समस्या भोगिरहेका छैनन्, नेपाली नागरिक भनेपछि बिरामीलाई भेट्ने पाससमेत पाउन समस्या भोगिरहेका छन् । अर्काे समस्या त खाने तथा बस्ने ठाउँको छँदै छ ।
समस्या आफ्ना ठाउँमा छ तर सानो चेकअप र रिपोर्टका लागि समेत भारतमा नै आउनुपर्ने बाध्यता अन्त गर्नका लागि भने सरकार र कुनै राजनीतिक दलको ध्यान गएको देखिँदैन । नेपालीले भोगेका समस्याबारे वास्तविक जानकारी नभएर पनि यता ध्यान नगएको हुन सक्छ । हुन त नेता र सरकारी कर्मचारी पनि उपचारका लागि बारम्बार दिल्ली नआउने होइनन् । तर उनीहरू दिल्लीमा झरे लगत्तै उनीहरूलाई लिनका लागि एयरपोर्टमा गाडी लिन पुग्छ, दूतावासमा आएर बस्छन् र अर्काे दिन दूतावासले नै डाक्टरलाई भेट्ने समय मिलाइदिएको हुन्छ र उपचार गरेर फर्कन्छन् ।
भारत गई उपचार गर्ने नेपाली बिरामीले भोगेका समस्या समाधान, सामान्य चेकअप र रिपोर्टका लागि दिल्ली नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त गर्न नेपाल सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
क्यान्सरको सामान्य पेट स्क्यान गर्नका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर भारत आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त गर्न आवश्यक छ । पछिल्लो समय क्यान्सर रोगीहरूको संख्या निकै बढेको पाइन्छ । कम्तीमा पर्याप्त पूर्वाधारसहित नेपालमै एउटा सुविधा सम्पन्न क्यान्सर अस्पताको निर्माण गरेमा न नेपालीले यो सास्ती पाउने थिए न उपचारका नाममा वार्षिक रूपमा अरबौं रुपैयाँ बिदेसिने थियो । नेपालका नेता तथा सरकारी अधिकारीहरूले कम्तीमा भारतका अस्पतालमा एकदिन भ्रमण गरेर केही बिरामी तथा तिनका आफन्तसँग कुरा गरे मात्र पनि वास्तविक अवस्था थाहा हुने थियो । अनि नेपालका अर्ब/खर्बपतिहरूले पनि नेपालमै सामान्य नागरिकलाई लक्षित गरेर अस्पताल खोल्नेबारे सोच्ने हो कि ?
आफ्नो बच्चाबारे हामीलाई कति ज्ञान छ ?
असार ५, २०७४ डा.मेरिना श्रेष्ठ
काठमाडौं — बालरोग विशेषज्ञका रूपमा काम गर्न थालेको झन्डै १२ वर्ष भइसकेको छ । यति लामो समयको अनुभवमा धेरै बालबालिकाको उपचार गर्ने मौका पाएँ ।
आफ्नो विशेष रुचि विभिन्न किसिमका अपांगता भएका बालबालिकाको उपचारमा भएको हुँदा उनीहरूका अभिभावकसँग पनि धेरै भलाकुसारी गर्ने मौका पाएँ । धेरैजसो यी अभिभावकको जिज्ञासा ‘मेरो बाबु कहिलेदेखि बोल्न थाल्छ वा हिंड्न थाल्छ’ भन्ने हुन्छ । ‘मेरी नानी अरू बच्चाजत्तिकै चलाख हुन्छे’ भन्ने जिज्ञासा पनि आउँछ ।
स्वस्थ बालबालिकाको परिप्रेक्ष्यमा उनका अभिभावकका प्रश्न सधैंजसो शारीरिक विकासजस्तै तौल र उचाइमा निहित हुन्छ । अहिलेसम्मको अनुभवमा बिरलै कुनै पनि आमा वा बुबाले मेरो बच्चाको मानसिक विकास कस्तो छ वा कसरी बच्चालाई तेजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न सोध्ने गर्छन् । यस्ता प्रश्न पनि धेरैजसो स्कुल जान थालेपछि, पढाइमा कमजोर देखिन थालेपछि मात्र गरेको पाइन्छ ।
कुनै पनि बालबालिकाले भविष्यमा हासिल गर्ने साक्षरता, आयआर्जन, उसको तीन वर्षको मानसिक विकासले निर्धारण गर्ने गरेको अनुसन्धानहरूले निचोड निकालेको छ । हाम्रो जस्तो न्यून विकासोन्मुख राष्ट्रका बालबालिका गरिबी, विभिन्न किसिमका संक्रमण, कुपोषणका कारण उनीहरूको मानसिक विकास झन् बढी जोखिममा पर्न गएको छ ।
यसका साथै आमाबुबामा आफ्ना बच्चाहरूको मानसिक विकासको गतिका बारेमा ज्ञान नहुनु, साथै उमेरअनुसारको बालबालिकासँग कसरी बोल्ने वा खेल्ने भन्ने कुराको ज्ञान नहुँदा यी कलिला बच्चाले आफ्नो जीवनको पहिलो महत्त्वपूर्ण समय गुमाइरहेका हुन्छन् । साथै यस्तो ज्ञानको कमीले गर्दा समस्या भएका बालबालिकालाई स्वास्थ्योपचारका लागि ढिलो पुर्‍याउने प्रवृत्ति रहन्छ, जसले गर्दा उपचारमा समेत ढिलाई हुन्छ ।
यसै सिलसिलामा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बालरोग विभागबाट काठमाडौं र भक्तपुरका करिब १,५०० आमामा बच्चाहरूको मानसिक विकासका बारेमा अनुसन्धान गरिएको थियो । उक्त अनुसन्धानअनुसार यी आमाहरूमा आफ्ना बच्चाको विभिन्न चरणको विकास जस्तै मुस्कुराउने, आवाज निकाल्ने वा बोल्ने, बस्ने, हिंड्ने वा काल्पनिक खेल खेल्ने आदि ज्ञान कम भएको देखियो । त्यसैगरी बालबालिकासँग घरमै उपलब्ध साधारण सामान प्रयोग कहिलेदेखि खेल्न सुरु गर्ने वा बच्चासँग कहिलेदेखि कुरा गर्ने, कथा हाल्ने, गीत सुनाउने भन्ने ज्ञान पनि निकै कम देखियो । यस्तो ज्ञानको कमी शिक्षित तथा अशिक्षित आमा दुवैमा समान देखियो ।
प्रविधिको विकाससँगै आएको परिवर्तन, आमाबुबाको व्यस्तता आदि कारण आजभोलिका बच्चाको मनपर्ने खेलौना भनेकै मोबाइल, ट्याब, टीभी हुन थालेको छ । यस्ता उपकरण कलिलो उमेरका बालबालिकालाई दिँदा भविष्यमा यस्ता बच्चा बढी चकचके हुने, स्थिर रहन नसक्ने, एकाग्र भएर पढाइमा ध्यान दिन गाह्रो हुने देखिएको छ । यसकारण अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्सले यस्ता उपकरण दुई वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई नदिनसमेत सिफारिस गरेको छ ।
त्यसकारण आफ्ना बच्चाहरूलाई बढी चलाख बनाउनका साथै राष्ट्रको साक्षरता बढाउन हामी सबैले आफ्नै घरदैलोबाट यसको सुरुवात गर्न सक्छौं । जन्मेदेखि नै बच्चासँग अनुहार हेरेर कुरा गर्ने, गाना गाउने, ४–५ महिनादेखि विभिन्न चहकिलो खेलौनाहरू दिने वा घरमै भएको गिलास, चम्चा आदि समाउन, बजाउन लगाउने, कथा हाल्नेजस्ता साधारण क्रियाकलापले पनि बच्चाको मानसिक विकासका लागि ठूलो मद्दत गर्छ ।
छ महिनाको उमेरदेखि नै बच्चालाई किताब समाउन वा खेल्न दिने वा सँगै बसेर बच्चासँग किताब पढ्नाले बच्चामा ठूलो भएर किताबसँग लगाव बढ्ने र पढ्न उत्प्रेरित हुने तथा आमाबुबासँग पनि सुमधुर सम्बन्ध बढ्ने हुन्छ । त्यसकारण हाम्रा बच्चाहरूलाई टीभी, ट्याब वा मोबाइल नभई उनका हातमा उमेर उपयुक्त खेलौना वा किताब थमाउन थाल्नुहोस् ।
बितेको समय फर्केर आउनेछैन, त्यसैले आजदेखि नै यसको सुरुवात तपाईं–हामीबाट गरिहालौं ।
उपप्राध्यापक श्रेष्ठ त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी बालरोग विशेषज्ञ हुन् ।